Umgaqo-nkqubo waBucala-MysticBr-Portal de Mística
Umgaqo-nkqubo weMfihlo MysticBr
Zonke iinkcukacha zakho eziqokelelweyo ziya kusetshenziselwa ukunceda ukuba u tyelele kwiziko lethu njengento evelisayo kunye neyokuzonwabisa njengoko kunokwenzeka.
Isiqinisekiso sobumfihlo bedatha yobuqu yabasebenzisi bendawo yethu sibalulekile kwiMysticBr.
Lonke ulwazi lomntu olunxulumene namalungu, ababhalisi, abathengi okanye iindwendwe ezisebenzisa i-MysticBr ziya kuphathwa ngokuhambelana noMthetho woKhuseleko lweDatha yoMntu ka-Oktobha 26, 1998 (uMthetho No. 67/98).
Ulwazi yakho eqokelelwe zingaquka igama lakho, imeyili, inombolo yomnxeba kunye / okanye iselula, idilesi, umhla wokuzalwa kunye / okanye nabanye.
Ukusetyenziswa kweMysticBr kucingela ukwamkelwa kwesi siVumelwano saBucala. Iqela leMysticBr linelungelo lokutshintsha esi sivumelwano ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Ke ngoko, sicebisa ukuba ujonge umgaqo-nkqubo wethu wabucala rhoqo ukuze uhlale usexesheni.
Njengamanye amawebhusayithi, siqokelela kwaye sisebenzisa ulwazi oluqulethwe kwiintengiso. Ulwazi kule ntengiso ziquka IP yakho (Internet Protocol), ISP yakho (umniki-sevisi ye-intanethi, ezifana Sapo, Clix, okanye ezinye), isikhangeli oyisebenzisileyo yiya kwiziko lethu (ezifana Internet Explorer okanye Firefox), ixesha lokutyelela kwakho kunye nawaphi iphepha owatyelele kwiwebhusayithi yethu.
I-Google, njengomthengisi wesithathu, isebenzisa ikhukhi ukubonisa iintengiso kwiwebhusayithi yethu;
Nge-cookie ye-DART, i-Google ingabonisa iintengiso ngokusukela ekutyelelweni komfundi ezenziwe kwezinye iiwebhusayithi kwi-intanethi;
Abasebenzisi banokukhubaza ikhukhi yeDART ngokutyelela umnatha wenethiwekhi yobumfihlo kunye neentengiso zeGoogle.
Ikhukhi kunye neewebhu zee-Beacons
Sisebenzisa ii-cookies ukugcina ulwazi, njengezinto ozikhethile xa uvakashela iwebhusayithi yethu. Oku kungabandakanya i-popup elula, okanye umnxibelelwano kwiinkonzo ezahlukeneyo esizibonelayo, njengeeforamu.
Ukongezelela, sisebenzisa i-advertising party yesithathu kwiwebhusayithi yethu ukuxhasa iindleko zokugcina. Ezinye zezi sabathengisi ukusebenzisa iteknoloji ezifana cookies kunye / okanye Nezinto web xa ezithengisa kwisayithi yethu, nto leyo iya kuthumela ezi sabathengisi (ezifana ne Google nge AdSense Google) Kwakhona ukufumana iinkcukacha zakho zobuqu, ezifana idilesi ye IP, ISP yakho, isiphequluli sakho, njl. Lo msebenzi usetyenziswa ngokubanzi kwi-geotargeting (bonisa ukukhangisa kwe-Lisbon kuphela kubafundi baseLisbon ngokomzekelo) okanye ubonakalise ukukhangisa okujoliswe kuhlobo lomsebenzisi (njengokubonisa ukuthengiswa kwendawo yokutyela kumsebenzisi othe tyelela ii-sites ezikhulayo rhoqo, ).
Wena ubambe amandla ukucima cookies zakho izicwangciso zakho browser, okanye ngokulawula ezikhethwayo kwiinkqubo izixhobo Anti-Virus, ezifana Norton Ukhuseleko Internet. Nangona kunjalo, oku kungatshintsha indlela osebenzisana ngayo newebsite yethu, okanye ezinye iiwebhusayithi. Oku kuchaphazela okanye musa ukuvumela ukungena kwiinkqubo, okanye iziza iiforam zethu kunye nezinye iinethiwekhi.
Iqhagamshelana neeSayithi zamaThathu
I-MysticBr inekhonkco kwezinye iisayithi, ezinokuthi, ngokombono wethu, ziqulethe ulwazi oluluncedo / izixhobo zeendwendwe zethu. Umgaqo-nkqubo wethu wabucala awusetyenziswanga kwiisayithi zomntu wesithathu, ngoko ke ukuba undwendwela enye indawo kweyethu, kufuneka ufunde ipolisi yayo yabucala.
Asinabo uxanduva lomgaqo-nkqubo we-ngasese okanye umxholo okhoyo kulawo masayithi.